Isivumelwano Sobumfihlo-Ungasibhala Njani?
Njengakwiiseva ezininzi zewebhu ezisemgangathweni, iifayile zelog zeenjongo zamanani zigcinwa ku-https: //www.nasilyazilir.info/ Ezi fayile; Inolwazi oluqhelekileyo olufana nedilesi yakho ye-IP, umboneleli wakho wesevisi ye-intanethi, iimpawu zesikhangeli sakho, inkqubo yakho yokusebenza, kunye nokungena kunye namaphepha akho okuphuma kule ndawo. Iifayile zeLog azikaze zisetyenziselwe iinjongo zobalo kwaye azophuli imfihlo yakho Idilesi ye-IP kunye nolunye ulwazi aluhambelani neenkcukacha zakho.
Sipapasha iintengiso ezivela kwiinkampani zangaphandle kwindawo yethu (uGoogle, njl. Njl.). Ezi zibhengezo zentengiso zingaqulatha iicokies kunye neicookies ezinokuqokelelwa zezi nkampani kwaye akunakwenzeka ukuba sifikelele kulolu lwazi. Sine-Google Adsense, njl. Sisebenza kunye neenkampani, nceda ufunde izivumelwano eziyimfihlo kumaphepha abo.
Igama elithi "maktad cookie lisetyenziselwa ukuchaza ifayile yombhalo encinci ebekwa yiseva yekhasi lewebhu kwikhompyuter yakho kwikhompyuter. Amanye amalungu endawo yethu anokusebenzisa iicookies ukubonelela ngokusebenziseka lula. Iikuki kunye neebhukhoni zewebhu zinokusetyenziselwa ukuqokelela idatha yentengiso kwintengiso ezikhoyo kwisiza. Oku kwenziwa ngemvume yakho kwaye unokuthintela oku ngokutshintsha useto lwebrawuza yakho.
Amakhonkco angaphandle: https://www.nasilyazilir.info/ amakhonkco esiza kwiidilesi ezahlukeneyo ze-intanethi kumaphepha ayo. https://www.nasilyazilir.info/ ayinaxanduva lokuqulathiweyo okanye imigaqo yabucala yeesayithi apho inika amakhonkco kunye neebhanile. Inkqubo yokuqhagamshela ekhankanywe apha ithathwa ngokusemthethweni njenge- "referencing".
Zonke iindwendwe zethu zithathwa njengezifundile kwaye zamkela umgaqo-nkqubo wethu wabucala ongezantsi, nceda ufunde: Indawo yethu isebenzisa i-https: //www.nasilyazilir.info/ inkqubo yentengiso kaGoogle Adsense. Le nkqubo iqulethe icookie ye-DoubleClick DART esetyenziswa nguGoogle kwintengiso ezithunyelwa kwiiwebhusayithi zomshicileli apho kuboniswa iAdSense yeNtengiso yomxholo.
Njengomthengisi weqela lesithathu, uGoogle usebenzisa iicookies ekukhangeleni iintengiso kwindawo yethu. Ngokusebenzisa ezi kuki, inika intengiso esekwe kutyelelo lwabasebenzisi, indawo yethu kunye nezinye iisayithi ezikwi-Intanethi.
Abasebenzisi banokuthintela ukusetyenziswa kwecookie ye-DART ngokundwendwela intengiso kaGoogle kunye nomgaqo-nkqubo wabucala wenethiwekhi. Nanini na xa uGoogle endwendwela iwebhusayithi yethu, isebenzisa iinkampani zangaphandle zentengiso ukuhambisa iintengiso. Iinkampani ekubhekiswa kuzo zingasebenzisa ulwazi (ngaphandle kwegama lakho, idilesi, idilesi ye-imeyile okanye inombolo yomnxeba) oyifumene kutyelelo lwakho kwezi sayithi nakwezinye iiwebhusayithi ukukubonisa intengiso yeemveliso kunye neenkonzo eziza kuba ngumdla kuwe. Ukuze ufunde ngesi sicelo kwaye uthintele ukusetyenziswa kwezi nkcukacha zezi nkampani, ungasebenzisa isiHlomelo A semigaqo ye-NAI yokuzilawula yabapapashi (i-PDF) ukufumana ulwazi oluthe kratya.
Umntu ohamba ngephenyane